Shirkii saddex geesoodka Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo la isku fahmi waayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Waxaa natiijo la’aan uu ku soo dhamaaday shir saddex geesood ahaa oo shalay illaa xalay Madaxtooyada Garowe uga socday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Gaas iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sida ay sheegayaan warar qaar ,ugu horeyn Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa shirka la yimid qodob ah in Madaxda Puntland iyo Jubbaland ay marka hore aqoonsadaan Maamulka Galmudug oo uu xusay inuu ka kooban yahay Hal gobol iyo bar.
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa durbadiiba ka soo horjeestay soo jeedinta Ra’iisul Wasaaraha, waxaana ay sheegeen in aysan sinaba u aqoonsanayn maamul ka kooban hal Gobol iyo Bar oo hareer marsan Dastuurka Soomaaliya, waxaana ay si wada jir ah u u tilmaameen in maamulada dhismaya ee hoos imaanaya Dowladda Federaalka in ay noqdaan kuwo waafaqsan Dastuurka ay ku heshiyeen Ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale qodobka labaad ee la isku mari waayay ayaa ahaa in Madaxda Jubbaland iyo Puntland inay aqoonsadaan Guddiyada Xuduudaha iyo Doorashooyinka Federaalka, arrintaasoo Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen inay tahay mid aan u cuntamayn, waxayna si wada jir ah u sheegen inaan Guddiyadaas lagala tashan oo aysan aqoonsanayn.